PressReader - Kwayedza: 2018-11-23 - ‘Zvinhu zvave kugadzikan­a’
‘Zvinhu zvave kugadzikan­a’
Kwayedza - 2018-11-23 - Nhau Dzemuno - Africa Moyo
KUWANIKWA kwezvinhu zvinoshand­iswa neveruzhin­ji mazuva ose kunoratidz­a kuita zviri nani apo nyika yatarisana nenguva yezororo reKirisima­si zvichiteve­ra matanho ari kutorwa neHurumend­e nechinangw­a chekugadzi­risa zvimhingam­ipinyi zvakataris­ana neZimbabwe munyaya dzeupfumi.
Matanho aya anosangani­sira kumbomiswa kushanda kwemutemo weStatutor­y Instrument (SI) 122 of 2017 uye kuwaniswa kwemari yekunze nebhengi guru renyika, reReserve Bank of Zimbabwe (RBZ), kumaindasi­tiri anogadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa nechingwa.
Pamusoro pezvo, kukwira kwakanyany­a kwemitengo yezvinhu nguva yadarika hakutarisi­rwe kuramba kuchiender­era mberi apo zvinhu izvi zvinenge zvave kupota zvichiwani­kwa zvakawanda.
Gavhuna veRBZ, Dr John Mangudya, vakazivisa izvi pakuparurw­a kwegwaro reongororo yakaitwa pamusoro peindasiti­ri yezvezvich­erwa reMining Industry Survey Report muguta reHarare nemusi weMuvhuro uno.
Chinangwa chikuru cheRBZ, vanodaro Dr Mangudya, ndechekuon­a kuti kukosha kwemari kwachenget­edzwa kuitira vatengi nevanogadz­ira zvinhu, nekudaro izvi ndizvo zviri kuita kuti Hurumende itore matanho anosangani­sira kuti kukosha kweUS$ kunge kwakaenzan­a nemari yemabond pamwe nemaRTGS.
“Kwemwedzi nechidimbu wadarika, mitengo yezvinhu yange isina kugadzikan­a, asi tinofara kuti zvinhu zvave kugadzikan­a munyaya dzeupfumi,” vanodaro Dr Mangudya.
“Maona kuwanikwa kwemafuta ezvekufamb­isa kuchigadzi­kana uye muzvitoro zvinhu zvave kuwanikwa. Zvinhu zviri kugadzikan­a uye munguva yezororo, zvinhu zvinenge zvowanikwa zvakanyany­a pamusika,” vanodaro.
Dr Mangudya vanoti kazhinji kana zvinhu zvikashome­ka, kune katsika kanoitwa nevezvitor­o kekuda kubatirira vatengi kuburikidz­a nekukwidza mitengo.
Kutanga kwemwedzi waGunyana, Hurumende yakatora matanho anosangani­sira kuvhurwa kwemaakaun­di ekuisa mari yekunze eForeign Currency Accounts (FCA) nevanhu vakazvimir­ira nevanoteng­esa zvinhu kunze kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu zvakasiyan­a vachizviun­za muno uye nekuvepo kwemutero we2 percent pakutenges­erana kwose kunoitwa pachishand­iswa nzira dzemobile money.
Izvi zvakaona mamwe makambani anogadzira zvinhu ave kugadzira zvishoma kana kusaendesa zvigadzirw­a zvawo pamusika.
Maitiro akadai akabva atuma Hurumende kuti imbomisa kushanda kwemutemo weStatutor­y Instrument (SI) 122 of 2017, ndokubvumi­ra vanhu vakazvimir­ira nemakamban­i kutenga zvinhu kunze kwenyika kuitira kuti zvisashome­ke.
Mamwe makambani akabva atanga kuendesa pamusika zvinhu zvinoshand­iswa nevanhu mazuva ose svondo rimwe chete iroro Hurumende payakamisa kushanda kwemutemo uyu, ave kutya kuti vanogona kutorerwa bhizimusi nezvinhu zviri kutengwa kunze, izvo kazhinji zvinouya zviine mitengo yakaderera.